▷ Ku soo dejiso WhatsApp 2021 bilaash, JOOJI DAMBE - Androidsis | Androidsis
Android, sida inbadan oo idinka mid ahi ogtahay, waa nidaamka ugu isticmaalka badan aduunka, oo leh saamiga gaadha 80% dhamaan talefannada casriga ah ee hadda shaqeeya, nidaamka hawlgal ee Google (Alphabet) ayaa hogaamiya. Halkan waa baahida iyo mudnaanta ku soo dejiso WhatsApp-ka Android (o kaftanka download, sida uu soddoggaa dhihi lahaa), dalabka farriinta degdegga ah ee ugu caansan kama maqnaan karno nidaamyada moobiilka ee ugu caansan suuqa.
Marka, markale waxaan rabnaa inaan ku barino wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato WhatsApp loogu talagalay Android iyo sida ugufiican ee looga faa idaysan karo.
1 Sidee WhatsApp u shaqeeyaa Android
2 Si bilaash ah ugu soo dejiso WhatsApp-ka Android-ka
3 Soo Degso WhatsApp APK
4 Noocyada kale ee WhatsApp ee aad kala soo bixi karto
4.1 Soo Degso WhatsApp Plus
4.2 Soodejiso WhatsApp GB
4.3 Soodejiso aero WhatsApp
4.4 Soo dejiso WhatsApp hufan
5 Sida loo cusbooneysiiyo WhatsApp-ka Android
6 Ku rakib WhatsApp kiniinka Android
7 Sida loo rakibo WhatsApp Beta bilaash
8 Shuruudaha lagu rakibo WhatsApp
9 Mobiles noocee ah ayaan awoodi doonin inay rakibaan WhatsApp?
Sidee WhatsApp u shaqeeyaa Android
WhatsApp waa macaamil fariin deg deg ah sida kuwa kale. Faa'iidada WhatsApp ama wixii cusbaa ee maalintiisii, waa xaqiiqda ah inay ka faa'iideysato buugga taleefankeenna si aan ugula sheekaysan karno dhammaan xiriiradayada habka ugu fudud. Markii aan bilowno wadahadal aan la yeelanno mid ka mid ah xiriiradayada, codsigu wuxuu ka faa'iideysanayaa WiFi-keena ama isku xirnaanta xogta moobiilka si uu ugu diro farriinta adeegeeda, ka dib, wuxuu u diri doonaa farriinta oo ay weheliso ogeysiis "riix" ah qaataha, xiriiriyaha waan xulnay. Warka fiicani waa in hawshani gebi ahaanba tahay mid gaar ah oo deg deg ah.
Si bilaash ah ugu soo dejiso WhatsApp-ka Android-ka
Ma dooneyno inaan seegno fursadda aan ku xusuusinno in WhatsApp xilligan uu yahay codsi gebi ahaanba bilaash ah iyo weligiis. Codsiga kuma jiraan xayeysiin ama wax kharash ah, waan u adeegsan karnaa markaan rabno iyo sida aan dooneyno. Waa inaan si fudud u qabannaa.WhatsApp APK loogu talagalay Android adeeg bixiye kasta oo rasmi ah, sida Google Play Store, ama hubso inaad si toos ah uga soo degsato WhatsApp-ka Android-ka Android-ka Isbaanishka ah degelka whatsapp. Helitaanka xiriiriyaha hore waxaan toos ugala soo degsan karnaa WhatsApp-ka Android-ka, haddii aynaan dareensanayn inaan kala soo baxno dalabka Google Play Store sabab kasta ha noqotee.
Kuwa isticmaala kuwa ma rabaan inay kala soo baxaan WhatsApp-ka Play Store-kaSababtoo ah waxay rabaan inay yareeyaan jiritaanka Google ee taleefannadooda Android, waxay u jeesan karaan dukaamo kale oo ay ku soo dejisan karaan barnaamijyada taleefanka, oo ay ku jiraan codsiga farriinta. Dukaammadaas qaabka soo deggu waa APK.
Waxaad u leexan kartaa dukaamada sida APK Mirror, mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan arimahan, halkaas oo noocyada kala duwan ee barnaamijka la bilaabayo laakiin waxa ugu fiican ayaa ah inaad ka soo degsato bogga rasmiga ah ee WhatsApp sida aad awoodid ka eeg xiriiriyahan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka uu leeyahay APK ayaa ah in beta iyo noocyadii hore la sii daayay haddii kale, haddii aadan tijaabin beta mooyee, ma awoodi doontid inaad ku tijaabiso taleefanka.
Dukaamo badan ayaa jira halkaas oo aad ka soo dejisan karto WhatsApp APK, laakiin APK Mirror waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, sidoo kale wuxuu ka mid yahay dukaamada ugu kalsoonida badan. Markaad cusbooneysiineyso barnaamijka waxaad u baahan doontaa inaad soo degsato APK-ka cusub ee gacanta lagu soo saaray oo aad sidaas ugu raaxaysato warkiisa.
Noocyada kale ee WhatsApp ee aad kala soo bixi karto
WhatsApp waxay leedahay guuto muhiim ah oo adeegsadayaal ah oo ka dambeeya, qaar badan oo ka mid ah waxay aqoon sare u leeyihiin horumarka iyo barnaamijyada. Tani waa waxa sababay qulqulka wax ka beddelka dalabka WhatsApp inuu soo baxo, tani waa sax Whatsapp lagu daro, wax ka beddelka WhatsApp oo noo oggolaanaya, tusaale ahaan, inaan qarinno heerka xiriirkeenna si joogto ah, u qaabeyno naqshadeynta ama ku darno howlo ka maqan.
Soo Degso WhatsApp Plus Waa wax aad u fudud, bog kasta oo ka mid ah bogagga uu nidaamku ku horumaray waxaan ka faa'iideysan karnaa dhammaan astaamahiisa iyo wararkiisa.
Isticmaalayaasha Android waxay ku soo dejisan karaan noocyadan taleefankooda, iyagoo si caadi ah u isticmaalaya APK. Markaad cusbooneysiineyso, waa inaad gacanta ku dhejisaa nooca cusub, sababtoo ah qaabkan laguma cusbooneysiin Google Play, sida ay ugu dhacdo qaabka caadiga ah ee arjiga.
Soodejiso WhatsApp GB
Sidoo kale loo yaqaan GBWhatsApp, waa qaab kale oo ka mid ah arjiga farriinta. Waa nooc la beddelay oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay wax ka beddelaan shaqooyinka qaarkood iyo muuqaalka arjiga taleefanka. In kasta oo noocaan si gaar ah loogu yaqaan gacan ka geysato hagaajinta waxqabadka codsiga si cad, si kafiican loogu isticmaalo.
Waa nooc sidoo kale bixiya ikhtiyaarro badan oo asturnaan ah, taas oo ah dhinac kale oo dadka isticmaala ay qiimeeyaan oo mararka qaarkood ku seegaan nooca caadiga ah ee arjiga. Waxay sidoo kale u oggolaan doontaa wax ka beddelka is-dhexgalka, oo leh xulashooyin gaar ah oo loo heli karo dadka isticmaala.
Nooca arjiga waad soo dejisan kartaa link this, halkaas oo aan sidoo kale marin u helno noocyada cusub ee la bilaabayo, halkaasoo shaqooyin cusub iyo horumarinno kala duwan lagu dhex daray. Mar labaad, waxaa lagu sii daayay qaab APK ah waana inaan gacanta kala soo baxno noocyada cusub, maadaama aan lagu cusbooneysiin Google Play.
Soodejiso aero WhatsApp
Waa nooc kale oo WhatsApp ah, oo aan ku soo dejisan karno taleefankeenna Android. Noocani waxay u taagan tahay gaar ahaan isbedelka bilicsanaanta ee ay keento, maaddaama ay si gaar ah u beddeleyso naqshadda arjiga farriinta, taas oo ka dhigaysa inay u eg tahay codsi gebi ahaanba ka duwan. Waa ugubnimada ama faa'iidada ugu weyn ee noocaan wax laga beddelay na siinayo.
Sida noocyada kale ee barnaamijka wax laga beddelay, adeegsadayaashu waxay leeyihiin hawlo taxane ah oo ay ku habeyn karaan barnaamijka. Waad wax ka beddeli kartaa interface-ka, marka lagu daro inaad haysato a fursado badan oo asturnaan, si loogu oggolaado arjiga inuu sifiican ugu habboonaado adeegsade kasta markaad isticmaaleyso.
APK-ka noocaan wax laga beddelay ee dalabka waxaa lagala soo bixi karaa xiriiriyahan. Markaad cusboonaysiinayso waa inaad gacanta ku soo dejiso APK kasta oo cusub taas ayaa laga bilaabay WhatsApp aero si ay ugu raaxeysato wararka ku dhex jira.
Soo dejiso WhatsApp hufan
Ugu dambeyntii qaababka arjiga ayaa loo soo bandhigay ikhtiyaar ahaan deggan, nadiif ah, ammaan ah oo si fudud loo isticmaali karo. Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo qarsoodi ah oo ku jira, taas oo u oggolaanaysa dejinta heerarka asturnaanta ee kooxaha ama sheekaysiga shaqsiyeed ee ku jira barnaamijka laftiisa. Tani waxay u oggolaaneysaa adeegsiga aad shakhsi ahaan loo aaminay oo ammaan ah mar walba.
Waxay sidoo kale bixiyaan shaqooyin qaarkood sida awoodo inaad u dirto farriimo lambar kastaXitaa haddii aadan ku haynin ajandahaaga, ku qor astaamo badan xaaladdaada ama ku dhaji sawirrada astaanta u ah xiriiradaada. Waa hawlo aynaan ka heli karin nooca caadiga ah ee arjiga, markaa waxay siinayaan adeegsiyo badan, taasoo ka dhigaysa mid xiiso badan.
WhatsApp-ka hufan ee 'APK' ayaa lagu soo dejisan karaa xiriiriyehan. Sida qaybaha kale ee wax laga beddelay ee dalabka, waa inaad gacanta ku soo dhigtaa APK-ka cusub markasta oo cusboonaysiin cusub la heli karo. Lama cusbooneysiin doono Google Play sida nooca caadiga ah ee arjiga.
Haddii aan rabno inaan ogaano sida loo cusbooneysiiyo WhatsApp, waxaan haysanaa laba ikhtiyaar oo si cadaalad ah u cad oo aan ku qaban karno nooca cusub ee WhatsApp ee loogu talagalay Android.
Waxaan u tagi karnaa bixiyahayaga rasmiga ah ee arjiga bixiya, xaaladdan oo kale waa Google Play Store, mar alla markii aan galina, waxay nooga digi doontaa barnaamijyada diyaar u ah cusbooneysiinta, haddii aan helno WhatsApp, waxaan kaliya oo aan gujineynaa "cusbooneysiinta "in codsiga la soo degsado nooca ugu dambeeyay la heli karo oo si toos ah rakibi.
Dhinaca kale, waxaan si toos ah ugu tagi karnaa degelka whatsapp, soo dejinta WhatsApp .apk Waxaan ka soo dhejin karnaa galkayaga "soo degsashada" waxayna si otomaatig ah u cusbooneysiin doontaa barnaamijka iyada oo aan lumin xogtayada ama wadahadalkeena.
Ku rakib WhatsApp kiniinka Android
Laakiin kaliya ma dooneyno inaan ku heysano WhatsApp on our casriga ah Android, waxaan dooneynaa inaan ku helno meel kasta oo aan aadno iyo qalab kasta oo aan nahay. Taasi waa sababta ay waliba suurtogal u tahay adeegsiga WhatsApp kiniin ah Android. Fursadaha ay Android na siiso dhacdadan noocan ah way badan yihiin, iyo qaababka rakibidda sidoo kale. Haddii aan haysanno kiniin Android ah oo leh xiriir SIM ah ama haddii uu yahay uun WiFi, waxaan awoodi doonnaa inaan si fudud u rakibno WhatsApp.
Xulashada ugu horeysa waa inaad si toos ah u aado WhatsApp Web laga bilaabo kiniinka Android, laakiin waxaan rabnaa inaan sii wadno, waxaan dooneynaa inaan ku rakibno arjigayaga WhatsApp kiniin ah Android. Nasiib darrose, waxa aanaan awoodin waa inaan haysannaa lambar taleefan oo ku xiran laba aaladood oo isku mar ah, laakiin waxaan ka faa'iideysan karnaa lambar kale oo taleefan, mid toos ah ama mid dhab ah, si aan ugu haysanno WhatsApp kiniinkeenna bilaashka ah.
Sida loo rakibo WhatsApp Beta bilaash
Barnaamijka fariimaha caanka ah wuxuu leeyahay nooc beta ah oo la heli karo. Waad ku mahadsan tahay, waan awoodi doonnaa iskuday dhamaan wararka in u yimaado WhatsApp ka hor qof kale. Sidoo kale, tani waa wax aan ku heli karno bilaash. Ma ahan wax adag in lagu rakibo taleefankaaga Android, kaliya waa inaad raacdaa dhowr tallaabo.
Si taas loo sameeyo, waa inaad marin u hesho Bogga WhatsApp Beta, oo aad ka heli karto link this. Halkan, waxaad u baahan doontaa inaad gasho koontadaada Google ka dibna aad si fudud u riixdo badhanka "Noqo tijaabiye". Sidan oo kale, waxaad horeyba uga mid ahayd beta-kan.
Waxa xiga waa inaad kala soo baxdo nambarkii ugu dambeeyay ee WhatsApp taleefankaaga Android. Markii aad gasho astaanta barnaamijka ee Dukaanka Play, waxaad arki doontaa in WhatsApp Messenger (Beta) soo muuqdo hoosta ayaa kuu sheegi doonta inaad horay u ahayd tijaabo. Dhammaan inaad sameyso waa cusbooneysiinta barnaamijka. Marka, marka xigta ee aad soo gasho waxaad horey u sameyn doontaa sidii tijaabo beta. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad tijaabiso dhammaan wararka yimaada kahor qof kale.
Shuruudaha lagu rakibo WhatsApp
WhatsApp waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee aan ka helno Android. In kastoo, maahan in dhammaan adeegsadayaasha nidaamka taleefanka ku shaqeeya ay ka faa'iideysan karaan. Sida waxaa jira shuruudo dhowr ah si loogu rakibo. Shuruudaha qaarkood ee la xiriira nooca nidaamka hawlgalka.
Sida codsiyada kale, maadaama noocyada cusub ee Android ay yimaadaan, taageerada noocyadii hore lama sii taageeri doono. Waxay sidoo kale ku dhacdaa WhatsApp. Xaaladdaada, si aad u awoodo inaad isticmaasho barnaamijka, waa inaad leedahay a nooca u dhigma ama ka sarreeya Android 4.0. Inta badan dadka isticmaala waxay leeyihiin nooc ka sareeya. Laakiin, haddii aadan haysan, ma awoodi doontid inaad adeegsato barnaamijka.
Mobiles noocee ah ayaan awoodi doonin inay rakibaan WhatsApp?
Dhinac aad ugu dhow barta hore waa liiska taleefannada aan awoodi doonin inay rakibaan WhatsApp. Shirkaddu badanaa waxay cusbooneysiisaa liiskan si joogto ah, si looga fogaado waxyaabo aan fiicnayn oo loogu talagalay dadka isticmaala. Waxaa jira tiro taleefanno ah oo aan awoodi doonin inay rakibaan barnaamijka farriinta.
Nokia S40 Waa mid ka mid ah taleefannadan, oo aad awoodi doontid inaad adeegsato illaa Diseembar 31, 2018. Sidaa darteed, laga bilaabo Janaayo 1, ma awoodi doontid inaad isticmaasho ama rakibto dalabka.
Dhinaca kale, inta kale ee taleefannada leh nooc hore oo Android ah ayaa lagu daray. Kuwaas oo dhan moodooyinka leh Android 2.3.7 iyo noocyadii hore Waxay isticmaali karaan barnaamijka, illaa Febraayo 1, 2020. Marka taariikhdaas ay dhaafto, wax walba waxay muujinayaan in taageeradu dhammaan doonto, in kasta oo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin. Marka ma awoodi doonaan inay mar dambe ku isticmaalaan taleefannadooda.
Ka baxsan Android, waxaan sidoo kale leenahay taleefanno uu saameeyay kiiskan, oo aan awoodi doonin inay adeegsadaan WhatsApp. Noocyo leh Windows Phone 8.0 iyo noocyadii hore mar dambe marin uma lahan barnaamijka farriinta. Sidoo kale kuwa leh BlackBerry OS iyo BlackBerry 10 ma isticmaali karaan mar dambe. Liiskani wuu sii ballaadhayaa bilaha, markaa waa hubaal in magacyo cusub lagu dari doono. Haddii aad rabto inaad cusbooneysiiso liiskan, waxaad ka arki kartaa bogga barnaamijka, link this.